China Iburu ohia okpomọkụ mmetụta Manufacturer - Quality Iburu ohia okpomọkụ mmetụta Kwuru - Testeck Co., Ltd.
.Lọ > Ngwaahịa > Ike ọdụ okpomọkụ ihe mmetụta > Iburu ohia okpomọkụ ihe mmetụta
ọgwụgwụ ihu na-eguzogide okpomọkụ ihe mmetụta
A ga-eme nha ihu igwe dị nso na ihe a ga-atụle. Na ezi okpomọkụ mmesho na vetikal echichi, ọ na-eji maka okpomọkụ mmesho nke kpakpando na mpe mpe akwa, stator asọfe, ígwè isi, mgbali mkpịsị aka na nchọ bọs shei.
spindle akara okpomọkụ mmetụta
Maka mmụba okpomọkụ nke akara akara nke eriri mmiri, ọ nwere ike ịghọta npụpụ nke otu ahịrị nke mgbidi mgbidi na mgbidi tank mmiri na-enweghị njikọ achọrọ.
Etinyere na nlebanye anya na mpe mpe akwa na mmanụ okpomọkụ nke mmiri tobaim. Na nzaghachi nke mmetụ mmanụ na-emetụta ọnọdụ dị mgbagwoju anya, ngwaọrụ nchebe nke onye na-eduzi ihe mgbochi nwere ike igbochi mmebi siri ike nke ịma jijiji.
Testeck bụ otu n'ime ndị ọkachamara na ndị nrụpụta Iburu ohia okpomọkụ ihe mmetụta na China. Biko nweere onwe gị ịzụta nnukwu ogo Iburu ohia okpomọkụ ihe mmetụta dị na ngwaahịa ebe a wee nweta nkwupụta sitere na ụlọ ọrụ anyị. Ọzọkwa, ahaziri ọrụ dị.